सम्बन्ध समाचार अपडेट - कोसी अनलाइन | Koshi Online
सन्तुलित जीवनशैलीको प्रभाव मजबुत यौन इच्छा
विराटनगर / मानिस जवान वा परिपक्व भएपछि पुरुष हुन् वा महिला, यौनक्रियामा संलग्न हुन लालायित हुने गर्छन् । यसो हुनु स्वाभाविक पनि हो । शरीरको स्पर्श, नजरको हेराइ, अनि यौनाङ्ग घर्षणको चाहना प्रकृतिले नै
प्रेम दिवस विशेष : मायामा पर्दा स्वास्थ्यमा फाइदै फाइदा
विराटनगर / आज १४ फेब्रुअरी अर्थात् भ्यालेन्टाइन्स डे । नेपालमा पनि विशेषगरी युवापुस्तामाझ भ्यालेन्टाइन्स डे प्रणय दिवस वा प्रेम दिवसका रुपमा लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ । आजको दिन प्रेम सम्बन्धमा रहे
विराटनगर, २९ साउन । स्वस्थ यौन सम्बन्ध स्वस्थ जीवनको लागि आवश्यक हुन्छ । स्वस्थ यौन सम्बन्धका कारण लामो आयुसम्म बाच्न मद्दत गर्न सक्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन् । हप्तामा दुई पटक
यौन सम्पर्क गर्दा मास्क लगाउनुपर्ने अनुसन्धानकर्ताको सुझाव
बिहीबार, २९ जेठ, २०७७
विराटनगर, २९ जेठ । सामाजिक दूरीको अभ्यास, मास्कको प्रयोग, कम्तिमा २० सेकेन्डसम्म हात धुने - कोरोना भाइरस रोक्नका लागि सिफारिसहरू परिचित छन् । तर, अब अमेरिकाले कोरोना महामारीको अवधिमा यौन सम्प
प्रेम न त जात हेर्छ, न त देश । न त रूप हेर्छ न त रंग र धन । हेर्छ त बस् साँचो प्रेमको सौन्द्धर्य । किनकी साँचो प्रेमले मनको सौन्द्धर्यलाई स्वीकार गर्छ । यही कुरालाई वास्तविकतामा परिणत गराएका छन
विपरीत लिङ्गीप्रति किन आकर्षण बढ्छ ?
आइतबार, ०४ जेठ, २०७७
विराटनगर, ४ जेठ । महिला तथा पुरुषहरुको मस्तिष्कमा नै यस्तो गुण हुन्छ जसले विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण बढाउँछ । यो जुनसुकै अंग तथा भाग हेर्दा नै सामान्यतया एकअर्का प्रति आकर्षण बढी रहेको हुन्छ ।
यौन दुर्वलता हाटाउने घरेलु उपाय
आइतबार, २८ वैशाख, २०७७
विराटनगर (एजेन्सी), २८ बैशाख । मानिसहरुको सर्वाधिक चासोमा यौन रहने गर्छ । तर खुलेर कुराकानी गर्न नसक्दा भित्रभित्रै यो विषयले घरबार नै बिग्रिने अवस्थामा पुर्याएको पनि हुन सक्छ । यौन दुर्वलता शा
अपरझट हुने सेक्स बढी आनन्ददायी
विराटनगर (एजेन्सी ) अन्य विषयमा जस्तै गरी यौन सम्पर्कका लागि मानिसहरुले लामै योजना बनाएका हुन्छन् । तर यौन सम्पर्क योजनाबद्ध रुपमा भन्दा तत्काल आवश्यक्ता महसुस गरी भएमा आनन्ददायी हुने अध्ययनले देखाए
अध्ययन भन्छ : महिलाहरूले आफूमा कुरा लुकाएर राख्न सक्दैनन्
विराटनगर, ५ चैत । महिलाहरूले आफूले देखेको वा सुनेको कुराहरू कहिले पनि आफैँमा सीमित राख्न सक्दैनन् । केही दिनसम्म कुरा लुकाएर बसे पनि कसलाई सुनाउँ भन्ने भावना जाग्ने हुँदा उनीहरूलाई सुनाउन नसकेको क
अध्ययन भन्छ : झुट नबोली बस्न सक्दैनन् मान्छे
विराटनगर, ११ फागुन । दैनिक जीवनमा मान्छेले सोचेभन्दा धेरै झुटो बोल्ने गर्छन् । ‘वुड आइ लाइ टु यु’ का लेखक पल सिगर मानिसले झुट बोल्नुपछाडि थुप्रै कारणहरू रहेको बताउँछन् । विशेषगरी व्यक्तिगत स्व
अध्ययन भन्छ : उमेर बढेसँगै ‘सिंगल’ रहने चाहना पनि बढ्छ
विराटनगर, ७ फागुन । उमेर बढेसँगै मानिसको सोचमा परिवर्तन आउने हुँदा ‘सिंगल’ रहने चाहना पनि बढ्ने पाइएको छ । जर्मन सेन्टर अफ गेरोन्टोलोजीका स्कोलर्सद्वारा गरिएको एक अनुसन्धानले उमेर बढेसँगै एक्
यस्ता केटालाई मन पराउँछन् केटीहरू
विराटनगर, २ फागुन । मान्छेको स्वभावको बारेमा पत्ता लगाउन व्यक्तिको शरीरको बनावट, रंग, बोल्ने तरिका, व्यवहार तथा लुगा लगाउने तरिका र फेसनको आधारले मद्दत गर्छ । केटीहरूले पहिलो पटक केटालाई हेर्दा व
प्रेम दिवसमा डेटिङ जाँदा बिल कसले तिर्ने ?
बिहीबार, ०१ फागुन, २०७६
विराटनगर, १ फागुन । प्रेम दिवसका दिन अधिकाशं जोडीहरू डेटिङ जाने गरेको देखिन्छ । प्रेम दिवसको दिन सामान्य दिन जस्तो गरिने भेटघाटलाई डेटिङ भनेर उक्त दिन खाएको खानपान तथा खर्चको बिल प्रायः पुरुषले नै
माघमा जन्मेका मानिस प्रेममा असफल, यस्तो हुन्छ माघमा जन्मनेको स्वभाव
विराटनगर, ३ माघ । ज्योतिषशास्त्रलाई आधार मानेर आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउने मानिसहरू धेरै हुन्छन् । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार मानिसको चालचलन, व्यवहारलगायत अन्य गतिविधिलाई मानिस जन्मेको जन्मबार, महिना र सम
मान्छेले दिनमा करिब १ घण्टा अर्काको विषयमा कुरा गर्छन् !
सोमबार, २८ पुस, २०७६
विराटनगर, २८ पुस । अधिकांश मानिसहरू दिनमा एकपटक भएपनि आफ्ना अगाडि नभएको मान्छेको कुरा गरिरहेका हुन्छन् । मानिसहरूमा प्रायजसो प्रशंसा गर्ने देखि लिएर कुरा काट्ने बानी हुन्छ । ‘सोसियल साइकोलोजिकल एण
गायक रामकृष्णको डिभोर्स
बुधबार, ०९ पुस, २०७६
काठमाडौं ९ पुस । गायक रामकृष्ण ढकाल र निलम साहबीच सम्बन्धविच्छेद भएको छ । एक छोरीका अभिभावक रामकृष्ण र निलमले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सम्बन्धविच्छेद गरेका हुन् । पत्नी निलम साह ढकालले दिएको सम
शुक्रबार, ०४ पुस, २०७६
अध्ययनको निष्कर्ष : प्रिय मानिसले हात समात्नु बिरामीलाई पेनकिलर बराबर
विराटनगर, २९ मंसिर । आफ्नो प्रिय मान्छेले बिरामीको हात छुँदा मात्र पनि दुखाइ आधा कम हुन सक्ने पत्ता लगाएका छन् । ‘जर्नल अफ पेन’ मा प्रकाशित गरिएको इजरायलको युनिभर्सिटी अफ हइफाले गरेको अध्ययनपछि वैज्ञा
विराटनगर, २६ मंसिर । ५० प्रतिशत महिलाहरूले प्रेम सम्बन्धमा रहे पनि आफ्नो प्रेमीसंग छुट्टिनुअघि नै ब्याकअपमा अर्का साथी तयार पार्ने गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । डेली मेलका अनुसार, तत्कालको सम्बन्ध ट
विराटनगर, १ मंसिर । ज्योतिषशास्त्रलाई आधार मानेर आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउने मानिसहरू धेरै हुन्छन् । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार मानिसको चालचलन, व्यवहारलगायत अन्य गतिविधि मानिस जन्मेको जन्मबार, महिना र समयल
बुधबार, २० कात्तिक, २०७६
विराटनगर २० कात्तिक । विवाहको बेला दुलहा दुलहीले एकआपसको साइँली औंलामा औठी लगाइ दिने चलन छ । विवाह बन्धनमा बाधिएका महिलाहरूले बायाँ हातको साइँली औंला र पुरुषहरूले भने दायाँ हातको साइँली औंला
यस्तो छ बायाँ हातले लेख्नुको कारण
आइतबार, १७ कात्तिक, २०७६
विराटनगर, १७ कात्तिक । धेरैजसो मानिसहरू दायाँ हातको प्रयोग गरेर लेख्ने तथा काम गर्ने गर्छन् । भनिन्छ, बायाँतर्फको दिमागले दायाँ हातको नियन्त्रण र दायाँ भागको दिमागले बायाँ हातलाई नियन्त्रणमा राखेको हु
शनिबार जन्मिएका मानिस साह्रै रिसालु, यस्तो हुन्छ उनीहरूको स्वभाव
शनिबार, १६ कात्तिक, २०७६
विराटनगर, १६ कात्तिक । मानिसको व्यवहार, चालचलन, स्वभाव तथा अन्य गतिविधि मानिस जन्मेको बार, महिना र समयले निर्धारण गरेको ज्योतिष शास्त्रको दाबी छ । ज्योतिषहरूले मानिसको जन्मबार एवं जन्मेको समयले उसको स
जिब्रोबाट यसरी थाहा हुन्छ मानिसको स्वभाव
शुक्रबार, ०८ कात्तिक, २०७६
विराटनगर, ८ कात्तिक । शरीरको सानो अंग भएतापनि जिब्रोलाई वशमा राख्न नसकेमा यसले धेरै नोक्सानी गर्न सक्ने कुरामा हामी अनभिज्ञ छैनांै नै । जिब्रोको आकार र मोटाइबाट पनि मानिसको व्यक्तित्व झल्किन्छ । जस
कस्ता युवक मन पर्दैन् युवतीहरुलाई ?
मङ्गलबार, ०५ कात्तिक, २०७६
विराटनगर ५ कात्तिक । व्यक्तिको शरीरको बनावट, रंग, बोली, व्यवहार तथा लुगा लगाउने तरिका र फेसनको आधारमा पनि मान्छेको स्वभावको बारेमा पत्ता लगाउन सकिन्छ । त्यसै गरी महिलाहरूले पहिलो पटक पुरुषलाई हेर्दा य
सोमबार, ०४ कात्तिक, २०७६
विराटनगर, ४ कात्तिक । सित्तैमा खान पाउने लोभले पनि महिलाहरू डेटिङ जान सक्ने कुरा एक अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । अजुसा प्यासिफिक युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया मेरेडले गरेको एक अध्ययनपले सित्
आइतबार, ०३ कात्तिक, २०७६
विराटनगर, ३ कात्तिक । हँसिलो मुहार भएको मानिसले सजिलै अरूको मन जित्न सक्छ र छिट्टै सबैको प्यारो पनि हुने गर्छन् । हाँस्दा शरीरका अंगहरू सक्रिय हुनुका साथै शरीरमा एक किसिमको हर्मोन उत्पन्न हुन्छ । ज
यस्तो हुन्छ कात्तिक महिनामा जन्मने मानिसहरूको स्वभाव
शुक्रबार, ०१ कात्तिक, २०७६
विराटनगर, १ कात्तिक । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार मानिसको चालचलन, व्यवहारलगायत अन्य गतिविधि मानिस जन्मेको जन्मबार, महिना र समयले निर्धारण गरेको हुन्छ । को मान्छे कुन साल, कुन महिना, कुन बार तथा कति बेला ज
एक्लोपन मनपराउनु फाइदा कि बेफाइदा ?
विराटनगर, २९ असोज । मानिस सामाजिक प्राणी भएको कारण पनि ऊ एक्लै जिन्दगी बाँच्न सक्दैन । मानिस आफ्नो साथी, आफन्त तथा नातेदारसँग बोल्न, घुमघाम गर्ने, पार्टी तथा भोजहरूमा गएर रमाइलो गर्ने यी सबै मानिसलाई
सानोमा झुटो बोल्ने बच्चा पछि गएर बुद्धिमान् !
मङ्गलबार, २८ असोज, २०७६
विराटनगर, २८ असोज । सानो उमेरमा झुटो बोल्ने बच्चाहरूको पछि गएर संज्ञानात्मक क्षमता अर्थात् छिट्टै कुरा सिक्ने तथा स्मरण शक्ति राम्रो हुने दाबी गरिएको छ । उक्त कुरालाई बैज्ञानिकहरूले विभिन्न अध्ययन गरे
महिलाले पहिलो नजरमा पुरुषको के हेर्छन् ?
बिहीबार, ०९ असोज, २०७६
विराटनगर, ९ असोज । महिला र पुरुषलाई एक रथका दुई चक्का मानिने गरिन्छ । महिलाबिना पुरुष र पुरुषबिना महिलाको कल्पना गर्न गाह्रो हुने हुन्छ । कुनै व्यक्तिको शरीरको बनावट, रंग, बोली तथा व्यवहारको आधारमा पन
विराटनगर, २९ भदौ । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार मानिसको चालचलन, व्यवहारलगायत अन्य गतिविधि मानिस जन्मेको जन्मबार, महिना र समयले निर्धारण गरेको हुन्छ । को मान्छे कुन बार तथा कति बेला जन्मेका हो उक्त साइतले उ
शरीरमा कोठीको स्थानका अनुसार व्यक्तिको स्वभाव कस्तो ?
विराटनगर, १३ भदौ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार शरीरका विभिन्न अंगमा हुने कोठीका आधारमा व्यक्तिको चरित्र जान्न सकिन्छ । हिन्दू धर्ममा आधारित समुद्रशास्त्रमा समेत यसबारे वर्णन गरिएको छ । शास्त्रमा शरीरको क
सोमबार, ०२ भदौ, २०७६
विराटनगर, भदौ २ । विभिन्न अनुसन्धानहरुका अनुसार महिलाको मस्तिष्क पुरुषहरुको तुलनामा एकदम तीब्र गतिमा चल्ने गर्छ । महिलाहरुको उमेर भएको पुरुषको मस्तिष्कको तुलना गर्ने हो भने महिलाको मस्तिष्क उमेर पुरुष
पुरुषको तुलनामा महिलाहरू किन बढी रुन्छन् ?
चिकित्सा क्याम्पस महाराजगंज, काठमाडौंका फिजियोलोजी विभागका विभागीय प्रमुख डा. दिनेश बाँस्तोलाका अनुसार पीडा, दुःख, दुखाइ, आवेश, असफलता, कसैको मृत्यु, पीडा, तिब्र मनस्थिति उन्माद, आध्यात्मिक खुसी र तीब
महिलाहरुले कहिले पनि केहि कुराहरु आफैँमा सिमित राख्न सक्दैनन् । यसरी कुरा लुकाएको खण्डमा उनीहरुलाई कसलाई सुनाउ कसलाई सुनाउ हुने गर्छ । यदि केहि दिन सम्म उनीहरुले केहि कुरा लुकाएर बसे पनि पनि उनीहरुलाई
पुरुष विहान तर महिला राती चञ्चले
मङ्गलबार, १७ वैशाख, २०७६
विराटनगर, बैशाख १७ । हाम्रो समाजमा खुल्ला रुपमा सेक्सका विषयमा कुरा हुन सक्दैन् । यही बन्देजका कारण आफ्नो यौन समस्या र कमजोरी एक आपसमा छलफल गर्न नसक्दा पारिवारीक कलह समेत हुने गर्छ । बैवाहिक ज
डिप्रेसन भएका मानिसमाथि परिवार र साथीहरूको भूमिका यस्तो रहनुपर्छ
डिप्रेसन भनेको खाली मन उदास हुनु मात्र नभइ त्यस भन्दा अझ बढी हो । यो मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदयरोग आदि जस्तै एउटा रोग हो । यो रोगले हाम्रो सोचाई, भावना तथा व्यवहारमा असर गर्दछ । डिप्रेसन वा उदासिनता